Dukaameysiga Su'aalaha 🛍️ | ThatsLuck.com
Halkee baan ka heli karaa nambarka shaqeynta? Waxaa laga helayaa buugaagta aad ku iibsan karto 1-Guji
on Amazon. Fur liiska Iibso inaad ka hesho halkan kore oo aad doorato suuqa waddankaaga.
TheMaxay ka koobantahay buugan? Buuggu wuxuu ka kooban yahay lambarka hawlgelinta, tilmaamaha soo dejinta iyo qaar ka mid ah faqsyadaas. Tilmaamaha buuxa waxay ku jiraan tiirarka kore ThatsLuck iyo fiidiyowyada ku jira ►YouTube
HyMaxay sidaa ugu jaban tahay? Buugaagta ThatsLuck waxay leeyihiin qiimo sax ah oo ay ku wada heli karaan dhammaan isticmaaleyaasha.
Anigu ma haysto koonto Amazon ah, miyaan ku bixin karaa PayPal? Maya, kaliya wax ka iibsiga suuqa Amazon ee dalkaaga waa suurtagal. Ka dooro goobta Amazon liiska Iibso 🔑 oo ku soo dejiso ebook-kaaga shidan 1-Guji
'Amazon ma ka jirto dalkayga, ma ku bixin karaa kaarka deynta? Maya, kaliya wax iibsiga Amazon waa suurtagal. Dabcan, waxaad weydiisan kartaa saaxiib ka yimid waddan kale inuu kuu sameeyo iibsashada ebook-ka adiga.
Anigu ma haysto akhristaha buugaagta shidan, sidee baan u akhrin karaa buugga si aan u helo koodhka hawlgalka? Haddii aad isticmaasho PC ama Mac, waxaad kala soo bixi kartaa barnaamijka Amazon ee bilaashka ah xiriirkan ► https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp loogu talagalay kombuyuutarkaaga / Tablet / Smartphone labadaba iOS iyo Android.
Ma daawan karo buugga, suurta gal ma tahay in koodhka ama ebook lagu helo emayl? Haddii ay jiraan dhibaatooyin ku saabsan ebook-yada waa inaad la xiriirtaa taageerada Amazon, ebook ama koodh waligeed laguma soo diri doono emayl, maxaa yeelay waxay ku xadgudbeysaa xeerarka Amazon.
Cusboonaysiinta ma bilaashbaa mise waxaan u baahanahay inaan iibsado koodh cusub oo firfircoon? Adeegsiga softiweerku wuxuu ku xiran yahay waxa laga soo sheegay ►Shuruudaha iyo shuruudaha, oo ay tahay inaad si taxaddar leh u akhrido oo aad si maldahan u aqbasho adoo adeegsanaya softiweer ama aad ku iibsanayso buug ku yaal Amazon.
Waan khaldanaa inaan iibsado buug gacmeed, ma beddeli karaa? Ma jiraan wax isbeddel ah ama beddelaad ah, markaa fadlan ha dalban.
MaAzonzon ii oggolaan maayo inaan buug iibsado, waayo? Amazon waxay la socotaa dhammaan macaamiisheeda, waxaa suuragal ah in lagaa soo warbixiyey anshax xumo ka jirta suuqa, sababtaas darteed waa inaad toos ula xiriirtaa taageerada Amazon.